Antaninarenina: Fa ahoana io zaridaina io? | Hevitra MPANOHARIANA
Antaninarenina: Fa ahoana io zaridaina io?
2008-01-26 @ 08:14 in Andavanandro
Ny vahiny ihany no mety hahatsikaritra, na ny elaela tsy niserana io zaridaina ao Antaninarenina io. Aleo aloha lazaina fa ny zaridaina lazaiko eto dia ilay eo amin'ny kianjan'ny fahaleovantena. Loza fa mety ho betsaka tsy ny mahalala ny anaran'io zaridaina io ho kianjan'ny fahaleovantena, sa efa mahafantatra ianao. Izay aloha no fahalalako azy e! noho ny tsangambato nanome endrika Madagasikara eo afovoany io sy ny tsangambaton'ny filoha Tsiranana filoham-pirenena Malagasy voalohany hatramin'ny niverenan'ny fahaleovantena no tena nahatsiarovako ny anaran'ny toerana.
Hatramin'ny andron'ny Ben'ny tanàna Razanamasy, raha tsy diso aho, no nisy fivoarana io zaridaina io. Noreharehana fatratra ho efa manakaiky ny any Andafy ny hatsarany. Nomena hikarakara azy rahateo ny "Le Buffet du Jardin" (aza tsiniana aho raha diso no fanoratro teny frantsay e!). Lasa fipetrapetrahana mahafinaritra ny olona ny nankeny.
Saingy raha mankeny kosa ianao amin'izao fotoana izao dia hahatsikaritra fa mihamitotongana indray ny hatsarany.
Tsia, diso aho. Mizara roa ry zareo ny zaridaina a! ny amin'ny ilany atsinanana voakolokolo tsara fa ny ilany andrefana zara raha voakolokolo raha atao hoe misy mikolokolo.
Ny mpanasaraka ny faritra izany dia ny lalana fizoran'ny mpandeha an-tongotra ahitana ny tsangambato roa nolazaiko teo.
Ny ilany atsinanana amin'io zaridaina io dia toy ny faritra miramirana sy tsara jerena izany. Voahety tsara ny bozaka ary mivandravandra ny fikarakarana e! ny olana aminy fotsiny dia talaky masoandro be ny eny noho ny tsy fahampian'ny hazo manaloka. Ny seza kosa aloha meva rahateo e.
Fa ny ilany andrefana indray rey olona. Oadray! Andeha mody atao hoe faritra maitso anaty tanàna dia tsy maninona na tsy voakolokolo aza nefa mba mahamenatra ihany eo anatrehan'ny mpandalo rehetra. Ny tombony kosa aloha dia be indray ny seza amin'ity faritra ity ary ankavitsiana amin'ireo seza ireo no tsy misy mipetraka mandritra ny tontolo andro. Ilay ahi-dratsy anie tsy maninona ny fisiany raha voalamina hahafinaritra ny maso fa mba mahasosotra kosa raha lasa karazana lobolobo e! Fa anjaran'iza ary ny mikarakara ity ilay andrefan'ny zaridainan'Antaninarenina lazaina amin'ny fomba ofisialy fa kianjan'ny fahaleovantena ity e? Dia tohizo ny dianao re fa eritreritra miserana fotsiny ny ahy.
tsy ny eo ihany no tsy misy fikarakarana fa ny zaridaina hafa koa indrindra fa ny etsy behoririka izay mifefy fanitso be manimba maso be mihitsy ilay izy
Nampidirin'i news2dago @ 09:05, 2008-01-26 [Valio]
Tafaverina indray e.
Mahavariana tokoa izany tsy fikolokoloana ny faritra andrefana izany. Fa ny nanaitra ahy teo amin'io kianja io dia ilay saina et amin'ilay vatolahy aorian'i Tsiranana io dia mitsingoloka. Misy antony manokana nampitsigoloana an'io ve sa hadisoana. Raha ity faharoa dia tokony harenina.
Nanoratra momba an'io tao amin'ny site-n'ny CUA aho tamin'ny taon-dasa fa tsy nahazo valiny. (Tsy mahazo valiny mihitsy aloha ny soratra alefa amin'ny "sites" gasy e, na gazety izany na inona. Asa inona no ametrahan-dry zareo ny hoe "Contactez-nous".)
Nampidirin'i Su @ 09:42, 2008-01-26 [Valio]
Ilay fonontenin'i Su :
Aza tonga dia ny maha-gasy kosa aloha no omena tsiny e. Ny infogasy fotsiny dia efa mandiso an'io teninao io. Ny serasera izay anoratanao eto koa, jereo ao amin'ny forum fotsiny ny patiny. Ataoko fa fahambanian-tsaina, na andao hatao hoe tsy ampy fandanjalanjana ny fanasoketana izay rehetra hoe "gasy".
Raha ny CUA no resahanao, mba efa nanoratra ve ianao ka nahazo valinteny avy amin'ny Mairie an'i Paris na New York ? ... ho fampitahana azy amin'ny site TSY gasy ...
Nampidirin'i lap @ 10:05, 2008-01-26 [Valio]
Andraso hoe hojereko izany saina mitsongoloka izany fa izay indray no tsy hitako.
Nampidirin'i jentilisa @ 12:06, 2008-01-26 [Valio]
Hono hoa, jentilisa v mba afaka maka sary eo rehefa hariva iny ny andro, malaza misy manao ny tsy fanao hono eo. Mba azo hamarinina ve izany?
Nampidirin'i volazanao @ 04:31, 2008-01-27 [Valio]
tadiavin'zala hanao ny tsy fanao indray ra-jentl kle :)
fa raha mahazo sary ol manao ny tsy fanao ao kosa ela tonga d scoop be manadala fa mandalondalova ihany eny rehefa harivahariva...
hambo-po malagasy voalaza ao @ MAP :)
marina ny voalazan'la hoe tokony tsy hatao mbambaray hanaratsiana ny "vita gasy" ny santionany hita fa tsy mety. Marina ihany koa anefa ny tsikera napetrany hoe tokony hoe interactif ilay izy...
tsy andraikitry ny ao @ mairie ve ny fikolokoloana an'io zaridaina io?
le tsy fahamatorana doly no mahatonga an'zao ny fahitako azy, fikolokoloana an'io ve d tsy ho vita kosa, ngamba efa misy vaomiera resaka zaridaina fotsiny any @ kaominina sa ahoana?
Nampidirin'i simp @ 19:42, 2008-01-27 [Valio]
simp, map ou pas map ;-)
Nampidirin'i lap @ 09:12, 2008-01-28 [Valio]
O ry zareo a!
Misy lalànany ange ny zavatra rehetra e! koa na misy manao ny tsy fanao aza eo angaha izany azo alaina sary dia avoaka eto.
Lalako ny Antaninarenina iny rehefa alina fa bebe olona foana any anaty zaridaina any. Fa izaho kosa tsy hitsikilokilo hoe inona ny ataony ao e!
Matoa ao efa maizina tsy maintsy misy zavatra ataony ao e!
Nampidirin'i jentilisa @ 09:18, 2008-01-28 [Valio]